DAWN Microfinance is teaming up with Software Group to accelerate financial inclusion in Myanmar – LYCA COMMUNICATIONS
Date: May 14, 2019Author: Rahul0Comments
Yangon – May 14, 2019– Early Dawn Microfinance Company Limited (“DAWN”) is partnering with Software Group to provide efficient and affordable financial service to Myanmar’s underbanked. The institution will implementaDigital Field Application (DFA) solution to digitize field operations, streamline operational workflows, and improve client convenience.
All data captured in the field, including client photos and KYC documents, will be securely and seamlessly synchronized with DAWN’s centralized Credits Core Banking System. The DFA’s web interface will provide Branch and HQ staff with access to the loan application and related data in the form of streamlined workflows to support the loan origination process.
မြန်မာ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက် DAWN အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းမှ Software Group နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
ရန်ကုန်၊ မေလ (၁၄)ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် – မြန်မာ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုအကျိုးထိရောက် မှုရှိစွာနှင့် စရိတ်စကသက်သာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Early Dawn အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (DAWN) မှ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဂရု (Software Group) နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းလိုက်ကြောင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအနေနှင့် မြေပြင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံများ၊ လုပ်ငန်းစီးဆင်းပုံများကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နှင့် ဖောက်သည်များပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သုံးဒီဂျစ်တယ် အက်ပလီ ကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော Digital Field Application (DFA) အား မိတ်ဆက်ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
DAWN သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးသော အသေးစားအချေးငွေလုပ်ငန်းများထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီး (၆)ခုတွင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ DAWN အနေနှင့် အမျိုးသမီးများအဓိကပါဝင်သည့် အငယ်စား၊ အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်အား ငွေကြေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအကူအညီများ ပေးအပ်လျှက်ရှိသည်။
အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိကတာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည့် ချေးငွေဆိုင်ရာအရာရှိများအနေနှင့် စာရွက်စာတမ်းများပေါ် အခြေခံထားသည့် မြေပြင်အစီအစဉ်များနှင့် ရုံးခွဲများအား အပြန်ပြန်အလှန်လှန် သွးရောက်လေ့လာနေရမှု များကြောင့် ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဂရု၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ဒီဂျစ်တယ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော (DFA) အားအသုံးပြုလိုက် ခြင်းအားဖြင့် DAWN၏ ဝန်ထမ်းများအနေနှင့် မြေပြင်လေ့လာမှုများအား ပိုမိုအချိန်ပေးပြုလုပ်နိုင်လာနိုင် မည်ဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနံှ့အပြားရှိ အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များအား အကူအညီများ ပိုမိုပေးအပ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဂရု၏ DFA မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင် မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်ပြီး DAWN ၏ငွေချေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏ အန်းဒရိုက်တက်ဘလက် (Android Tablet) တွင် အသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်အသစ်များဝင်ရောက်လာခြင်း၊ ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်း၊ ချေးငွေဆပ်ခြင်း နှင့် အခြားဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဆောင်ရွက်မှု များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာရုံးခွဲတစ်ခုချင်းစီမှ အပြီးအစီး ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချိတ်ဆက်မှုမရှိသောဧရိယာများတွင်ပင် အပြီးအစီးဆောင်ရွက်နိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နှင့် အလိုအလျောက်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းအဆင့်များအား ပိုမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက် နိုင်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ချေးငွေချပေးရန် အချိန်ကြာမြင့်မှုကိုလဲ ထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချနိုင်သွားမည်ဟု DAWN မှမျှော်လင့်ထားသည်။
မြေပြင်တွင်စုစည်းရရှိသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည့် ဖောက်သည်များ၏ ဓာတ်ပုံများနှင့် ကေဝိုင်စီ စာရွက်စာတမ်းများကို DAWN ၏ အဓိကစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Kredits Core Banking System နှင့်အညီ စနစ်တကျ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာပြောင်းလဲလိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ချေးငွေချပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် ချေးငွေလျှောက်လွှာနှင့် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ရုံးခွဲများနှင့် ရုံးချုပ်မှဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် DFA ၏ဝက်ဘ်ကွန်ရက်မှ စီစဉ်ထားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထူးခြားသော ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့ အတွက် DAWNအနေနှင့် ခေတ်မှီနည်းပညာနှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားပါတယ်။ DFA စီမံကိန်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းပျံ့နှံ့ရောက်ရှိမှုကို သေချာ သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု မရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလဲ အရည်အသွေးမြင့် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေး သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”ဟု DAWN ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr.Gonzalo Gonzalez ကပြောကြားခဲ့သည်။
“DFA စီမံကိန်း ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် Software Group နဲ့ ပူပေါင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရုံးတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုစွမ်းအား တိုးတက်လာရုံတင်မကဘဲ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေပါ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းကထည့်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Early Dawn အသေးစားငွေချေးကုမ္ပဏီလီမီတက်(DAWN)အား Save the Children International ၏အစီအစဉ် တစ်ခုအဖြစ် ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အဓိက အစုစပ်ဝင်သူ(၃)ဦးဖြစ်သည့် Accion International, Triodos Investment Management နှင့် FMO (the Dutch Development Bank) တို့နှင့်အတူ သီးသန့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားနှင့် အငယ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူပြုနေသည့် အရေးပါသည့် အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ် အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ DAWN အနေနှင့် ဖောက်သည်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၄ဘီလျံကျော် ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်(၂၀၁၉ မတ်လစာရင်းများအရ)။ DAWN သည် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အပ်နှံငွေလက်ခံခွင့်လိုင်စင် တရားဝင်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Software Group အကြောင်း။
Software Group သည် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် အဆင့်မြင့်တင်ပေးသော ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရုံးချုပ်မှာ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ ဆိုဖီယာမြို့တွင်ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလီးယား၊ ဘူဂေးလ်ရီးယား၊ အီဂျစ်၊ ဂန်ဟာ၊ အိန္ဒိယ၊ ကန်ညာ၊ မက်ဆီကို၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ရှိ ရုံးခွဲ၉ခုမှတဆင့် ကမ္ဘာတလွှားရှိ နိုင်ငံပေါင်း၆၅နိုင်ငံမှ ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို ဖန်တီးပြီး ငွေကြေးလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်တင်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။ Software Group၏ဖောက်သည်များထဲတွင်Bill & Melinda Gates Foundation, MasterCard & MasterCard Foundation, International Finance Corporation (IFC), World Bank, Asia Development Bank နှင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ၁၀ခုထဲမှ ၇ခုဖြစ်သည့် Allianz Bank Bulgaria, Atlantic Bank, Bank South Pacific, Asia Confederation of Credit Unions (ACCU) အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်။ www.softwaregroup.comတွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သည်။
ApplicationDawn MicrofinanceLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsSoftware GroupYangon
Previous Previous post: Suzuki starts the production and launches much awaited all-new Suzuki Ertiga,a7-seater model to Myanmar Market
Next Next post: Sweety Home Company launches free to download Viber sticker pack to mark Thadingyut festival of Myanmar